पहिलो ‘साउने सोमबार’ आज, कपिलवस्तुका शिवालय मन्दीरको चहलपहल के छ ? « Mayadevi Online News Portal
पहिलो ‘साउने सोमबार’ आज, कपिलवस्तुका शिवालय मन्दीरको चहलपहल के छ ?
प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७८ सोमबार १९:०६
भगवान शिवको प्रिय महिना साउनको पहिलो सोमबार कपिलवस्तुका विभिन्न शिवालय मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड देखिन्थ्यो । कोभिड १९ का कारण मन्दिर बन्द गरिए पनि भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । बिहानैदेखि जिल्लाको तौलिहवामा रहेको तौलेश्वरनाथ मन्दिर, लक्ष्मणघाट लगायतका मन्दिर परिसरमा भक्तजनहरू शिव पूजनका लागि फूलमाला र अक्षता बोकेर पुगेका थिए ।
कोरोनाका कारण मन्दिरमा भव्य पूराआजा नगरिए पनि वरपरका मन्दिर परिक्रमा र मूर्ति पूजा गर्दै शिवलिङ्गमा जल चढाएर महादेवको पूजा गरेका छन् । मन्दिर परिसरमा पुगेका सर्वसाधारणहरुले भने कोभिड महामारीलाई बेवास्ता गरिएको दृश्यमा देख्न सकिन्छ ।
त्यहाँ उपस्थित भक्तजनहरूले भौतिक दूरी पालन गरेका थिएनन् । कतिपयले त मास्क समेत नलगाएको देख्न सकिन्छ । सूर्य मिथुन राशी भएर कर्कट राशीमा प्रवेश गरेको र दक्षिणायन सुरु भएको यो महिनामा भक्तजनहरू महादेवका मन्दिरमा गएर पूजा आराधना गर्दछन् । यसो गरेमा सम्पूर्ण मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ ।